Wararka Maanta: Talaado, Sept 18, 2012-Israsaaseyn dhexmaray Askar kawada tirsan Ciidamada dowladda Soomaaliya oo ay waxyeello kasoo gaartay Arday
Qofka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa dhammaantood waxay ahaayeen arday kasoo baxay mid ka mid ah dugsiyada sare ee Muqdisho iyadoo aysan jirin waxyeello soo gaartay askartii ay israsaaseyntu u dhexeysa.
"Iskahorimaadku wuxuu u dhexeeyay askari ku hubeysan qoriga AK-47 iyo koox kale oo askar ah, kuwaasoo isaga daba-joogay, waxaana dhintay arday, saddex kalena dhaawacyo kala duwan ayaa soo gaaray," ayuu saxaafadda u sheegay goobjooge ku sugnaa halka ay israsaaseyntu ka dhacday.
Goobjoogaha ayaa sheegay in askariga la eryanahay uu soo dhacay jaad fara badan, taasna ay keentay in laga daba-yimaado oo uu dagaalku dhaco, iyadoo ay u suurogashay askarigii dhaca geystay ee lagu la daba-socday inuu goobta ka baxsado.
Dhaawacyadii ardayda ayaa goobta laga qaaday iyadoo maydkii ardayga kalena ay halkii lagu dilay ka qaadeen arday kale oo ay wax wada baranayeen, waxanaa falkan uu imaanayaa iyadoo dalka uu ka baxay xilli KMG ah ayna muuqdaan isbedello xooggan.
Ciidamada dowladda ayaa inta badan lagu eedeeyaa inay dhac geystaan, iyadoo dhowr jeer oo hore ay saraakiisha ciidamadu soo saareen amarro ay ku sheegeen in la ciqaabi doono askarigii dhibaatooyin u geysta dadka shacabka ah.